घटना\_दुर्घटना | हाम्रो गाउ : प्यारो रत्नेचौर
Category Archives: घटना\_दुर्घटना
रूखबाट खस्दा घाइते
रत्नेचौर १, घर्तिथर निवासी ४० वर्षिय सहनशिला पुन काप्राको रूखबाट खस्दा घाइते भएकी छन । हिजो बिहिबारका दिन अचार खानलार्इ काप्राको फुल टिप्ने क्रममा उनी रूखबाट खसेकी हुन । उनको बाँया हातको हड्डी टुक्रनुका साथै पिठ्युमा पनि चोट लागेको छ । घाइते पुनको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताए । ४-५ दिनको आराम पछि उनलार्इ डिस्चार्ज गरिने चिकित्सकलार्इ उदृत गर्दै उनका आफन्तले बताए । विभिन्न महिला तथा ब्यवसायिक समूहकी क्रियाशिल सदस्य पुन रत्नेचौर गा.वि.स. कै अनुकरणीय ब्यावसायिक अगुवा कृषक हुन ।
फुलमतीलार्इ लग्यो क्यान्सरले
श्याम खत्रीको सहयोगमा
विगत लामो समयदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पिडित फुलमती दर्जी (माता दमिनी) को फाल्गुण २ गते देहावसान भएको छ । ५३ बर्षीया उनको ३ वर्षदेखि उनका छोरा कृष्ण दर्जीले भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पतालमा नियमित उपचार गराउँदै आएका थिए । आमाको उपचारको क्रममा आफूले इन्डियामा आर्जन गरेको रकम सिद्दिएर पनि ऋण गर्दा ठूलो आर्थिक ब्ययभार खेप्नु परेकोमा उनी दुःखी हुँदै भन्छन् – आमालार्इ बचाउन पनि सकिएन, पैसा पनि खर्च भयो !
धनकुमारी बोगटी रहिनन
हामीलार्इ ढिलो गरी प्राप्त समाचार अनुसार रत्नेचौर-५, लामगराकी ५९ वर्षीय धनकुमारी बोगटीको असोज २० गते देहावसान भएको छ । केहि दिन अगाडी देखि ज्वरो र टाउको दुख्ने गरेको बताएकी स्व. बोगटीको उपचार क्रममा मणिपाल हस्पिटल पोखरामा मृत्यु भएको हो । पारिवारीक श्रोतका अनुसार उनको मृत्यु टाइफाइडका कारण भएको थियो । उनका १ छोरी र २ छोरा छन । जेठा छोरा राजेन्द्र बोगटी बैदेशिक रोजगारका कारण देश बाहिर भएकाले स्व. बोगटीको क्रियाकर्म कान्छा छोरा महेन्द्र बोगटीले गरेका छन ।